Software Company တစ်ခုကို ဘယ်လို outsource လုပ်မလဲ? အပိုင်း(၁) - Nanolabs Blog
Software Company တစ်ခုကိုဘယ်လို outsource လုပ်မလဲ? အပိုင်း(၁)
Software Company တစ်ခုရှာရတာ အရမ်း Challenging ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပိုက်ဆံတွေ အချိန်တွေရင်းထားရပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Result ထွက် မလာရင် ငွေကုန် လူပင်ပန်း ၂ ခါမောဖြစ်မှာပါ။
ဒါကြောင့် Software Company ကို သေချာ Outsource လုပ်နိုင်ဖို့ လမ်းညွန်ပေးချင်ပါတယ်။
Stage One: Basic Research
သင်က IT Firm တစ်ခု ကို ရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုပါစို့ ၊ တစ်ခု က Expertise ကောင်းကောင်း ရှိတယ်။ Experience မရှိဘူး။ တစ်ခုက Projects တွေ အများ ကြီးလုပ်ဖူးတယ်။ နောက် တစ်ခုက သင့် သူငယ်ချင်း Recommend ပေးထားတာပေါ့။ အဲဒါဆို သင် ဘာ ရွေးမလဲ?
အများစု က ကိုယ် နဲ့ ခင်တဲ့ သူကို ပဲ Recommend ပေးတာကို မျက်စိ စုံမှိတ်ပြီး ရွေး တာများပါတယ်။ အကြံပေးလိုတာက တော့ မျက်စိ စုံမှိတ် ပြီး Emotion နဲ့ အရင်ဆုံး မဆုံးဖြတ်လိုက်ပါနဲ့။
ပထမ အဆင့် အ နေ နဲ့ အရင်ဆုံး ကိုကိုယ်တိုင် Software Company တွေ ကို List လုပ်ပါ။ ပြီးရင် ကိုယ်နဲ့ကိုက်မယ့် Service ကို ဘယ်လောက် Focus ထားပြီးလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကို ပြန်ဆွဲထုတ်ပါ။ ပြီးရင် စကာတင် ထဲကမှ ပြန်ရွေးပါ။
ပထမ ဦးဆုံးလုပ်ရမှာက အရင်ဆုံး ကိုယ် Outsource လုပ်မည့် ကုမ္ပဏီရဲ့ အရင်တုန်းက လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ Projects တွေကို လေ့လာပါ။ အဲဒါမှပဲ သူတို့ ဒီဇိုင်းကာလာ အနေအထား ဘယ်လိုရှိလဲ ဘယ်လို နောက်ဆုံးပေါ် Technology တွေနဲ့ ရေးထားလဲဆိုတာ သိမှာပါ။ နောက်ပြီးတော့ သင် လုပ်ချင်တဲ့ Project နဲ့ အလားတူမျိုး လုပ်ခဲ့ဖူးရင် သူတို့ ဘယ်လောက်ထိ Domain Knowledge ရှိလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်နိုင်မှာပါ။
Company တွေ တော်တော် များများ က သူတို့ လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ Customer တွေရဲ့ Reviews တွေ Feedback တွေကို သူတို့ Website (ဒါမှမဟုတ်) Facebook Page မှာ တင်လေ့ရှိကြတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ် Review ဟုတ်မဟုတ် Service ကောင်းတာအမှန်အကန် ဟုတ်မဟုတ် ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ? အမှန်တကယ် Service ကောင်းမကောင်း သိလိုရင်တော့ သူတို့လုပ်ခဲ့ ဖူးတဲ့ Client တွေကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်ပြီး မေးမြန်းလို့ရနိုင်ပါတယ်။
Social Media က နေလည်း ကုမ္ပဏီတစ်ခု ရဲ့ အကြောင်း လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ B2B Social media တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Linkedin မှာ ကုမ္ပဏီရဲ့ Activities တွေ ၊ ဝန်ထမ်း ဘယ်နှစ်ယောက် ရှိလဲ၊ ကုမ္ပဏီရဲ့ Location အစရှိသဖြင့် အကဲခတ်နိုင်ပါတယ်။